Nhema iPhone 7 pfungwa, naMartin Hajek | IPhone nhau
Kunyangwe Apple isina kuzviziva pachena, avo vari muCupertino vakamira kupa iyo nhema nhema iPhone mushure mematambudziko akatambura muiyo iPhone 5 yeruvara rwakafanana. Muchigadzirwa ichocho mabhezeri akakwenenzverwa uye iyo iPhone yakarasikirwa nezvakawanda zvekukwezva kwayo, ichibva pakuva mudziyo une kupera kwakanakisa kune imwe ... zvishoma zvakanaka. Space grey yakashandiswa kubvira ipapo uye nhau dzakanaka ndedzekuti inotevera iPhone ichave yakasviba. Asi, hazvingave zviri nani here kana vakatipa mukana wekutenga iPhone 7 nhema?
Nyaya dzataurwa pamusoro apa dze iPhone 5 dzakaita kuti Apple inyatso svinura kuburitsa gare gare maaluminium zvigadzirwa mune grey. Asi runyerekupe rwazvino rwekuti grey nzvimbo ichave yakasviba zvakanyanya yagadzira dhizaina Martin Hajek (iye mumwechete iye akagadzira pfungwa yeiyo iPhone 7 Yakadzika Bhuruu) gadzira concepto iPhone 7 (inowanikwa zvizere HERE) nhema dzese, iro iro vazhinji vedu tinorasikirwa (uye pachangu ndakaenda kugoridhe kana sirivheri nekuti haisisipo).
Iyi ingave iri iPhone 7 Nhema
Hajek akaisa makuhwa ekupedzisira mune yake pfungwa. Imwe isiri itsva ndeye iyo EarPods Mheni, asi chitsva ivara rayo. Parizvino, tambo dzese uye mahedhifoni anosvika muiyo iPhone kana iPad bhokisi machena uye iyo inoonekwa mune ino pfungwa yakasviba. Kune rimwe divi, iyo nhema iPhone 7 yeiyi pfungwa ine yakakura kamera uye zvimwe kumucheto, sezvataona mukudonha kwese kusvika parizvino.
Iyo zvakare yakaisikidza inodakadza ruzivo: inobata pamba bhatani, ndokuti, haina kunyura. Uye ndeyekuti runyerekupe rwechangobva kuitika rinovimbisa kuti iyo iPhone 7 ichave ne kumanikidza kwekutanga bhatani, saka tinogona kuita zviito zvakasiyana zvichienderana nekumanikidza kwatinoshandisa, chimwe chinhu chakafanana nezvatinoita kare ne 3D Touch.
Mubvunzo unosungirwa: ungatenge here iyi nhema 7 iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » IPhone 6s Plus » Nhema iPhone 7 pfungwa, naMartin Hajek
Kana ndikatenga. Dema nderimwe diki diki.
Chero bedzi ivo vachibvisa bhatani reropa rekutanga uye voritsiva neyakaomeswa-inotapira, ini ndaizotenga.
Ini ndaneta chaizvo nebhatani repamba, ini ndagara ndichifanira kushandisa jailbreak + chaiyo imba kuteedzera yekubata bhatani (uye rinoshanda kwazvo). Asi kana vakapedzisira vakazvipira kuti vabvise kamwechete, chingave chikonzero chikuru chekutenga. Ini handikwanise kumira kunzwa kwekunakirwa uko bhatani repamba rinotumira kwandiri
Dema izere + imba inobata 3D inotonhorera
Spotify inopomera Apple yekukuvadza makwikwi ayo nekuramba yazvino app kuvandudza